အသေးအမွှားကအစ အရာအားလုံးက အဖေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တာမလို့ သူမကို ချစ်တယ်ဆိုရင် အဖေ့ကိုအရင် သွားပြောပါလို့ ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်(ရုပ်သံ) – Maythadin
အသေးအမွှားကအစ အရာအားလုံးက အဖေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တာမလို့ သူမကို ချစ်တယ်ဆိုရင် အဖေ့ကိုအရင် သွားပြောပါလို့ ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်(ရုပ်သံ)
May Thadin | November 13, 2020 | Celebrity | No Comments
ပရိတ်သတ်ကြီးရေအလန်းစားခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး စကားကိုချစ်စရာကောင်းအောင်ပြောတတ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်အားပေးမှုကိုခံထားရတဲ့ ယဉ်လတ်ကတော့ အက်ရှင်အခန်းတွေကိုလည်းပိုင်နိုင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကားကိုအမြဲတမ်းသွက်သွက်လတ်လတ်ပြောတတ်တဲ့
ယဉ်လတ်ကတော့ သူ့အတွက်အဖေက အမေလိုဖြစ်နေတာမို့ ရည်းစားစကားပြောချင်ရင် အဖေ့ကိုလာပြောပါလို့ ?????? ??????? နဲ့အင်တာဗျူးမှာ ဆိုထားပါတယ်။“သူများတွေဆို မိန်းကလေးတွေက အမေနဲ့နေတာများတယ် ယဉ်လတ်ကကျတော့အမေက ငယ်ငယ်ကတည်းကနေမကောင်းတော့ပြိုင်ပွဲတွေသွားလည်း
ဖေဖေပဲလိုက်တာ ရှုတင်တွေသွားလည်းဖေဖေပဲလိုက်တာဆိုတော့ အဖေက တစ်ခါတစ်လေ အမေလိုပဲပေါ့ တစ်ချို့သားအဖဆက်ဆံရေးနဲ့တောင်မတူဘူးမိန်းကလေးကိစ္စတွေတောင်အဖေကဖြေရှင်းပေးတာ အဖေက အမေဖြစ်နေတယ်“ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မေမေတို့ပြန်ပြောပြတာပေါ့ ပိစိလေးကတည်းက
ဖေဖေပဲအနှီးလဲ လုပ်ပေးတာပေါ့ ရှုတင်တွေဘာတွေမှာ အမျိုးသမီးကိစ္စဖြစ်ရင်လည်း ဘယ်သူမှမရှိဘူးလေ။ ဖေဖေကပဲသူ့ဘာသူသွားဝယ်ပေးတာပေါ့ အားလည်းနာပါတယ်”“ဒီလောကထဲစဝင်ကတည်းကရော အလုပ်မှန်သမျှဖေဖေ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့ မန်နေဂျာငှားရင်တောင်ဖေဖေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလိုမှာပဲ။
အဲ့တာကြောင့် ဖေဖေပဲမန်နေဂျာ ဖေဖေပဲအလုပ်လက်ခံပေါ့။ သမီးကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ့်အနားကိုချဉ်းကပ်လာရင် အဖေ့ကိုပြော အဖေ့ကိုပြောဆိုတော့ အဲဒီ့အခါကျတော့ ဖေဖေ့ကိုကြောက်ပြီး ဘယ်သူမှာရောက်မလာကြတော့ဘူးပေါ့ အိမ်မှာလည်း အဲဒီ့အတိုင်းနောက်နေကြတာ သမီးနဲ့ယူမှာလေ အဖေနဲ့ယူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။
အဖေရှာရင်အဖေ့အရွယ်တွေပဲထွက်လာလိမ့်မယ်တဲ့“အခုအိမ်မှာတိုင်ပင်ကြရင် အိမ်ထောင်ရေးလည်းပါလာတာပေါ့ အဖေပေးစားတာယူမှာလားပေါ့ အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆို မိဘသဘောတူဖို့လည်းလိုတယ်လေ အဲ့တာကြောင့်ရည်းစားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အဖေ့ကိုသွားပြော အဖေလက်ခံရင် ရည်းစားလာဖြစ်ပေါ့”
လို့ယဉ်လတ်ကဆိုထားတာပါ။ယဉ်လတ်ကတော့ လက်တလော သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး“ဒီနေ့က ကထိန်သင်္ကန်းကပ်တာပေါ့ ကိုခန့်အလှူပေါ့နော်မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ အမြင့်မြတ်ဆုံးအလှူပေါ့နော် ဘုန်းဘုန်းတွေဟောကြတာပဲ ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာ အားလုံးကုသိုလ်တွေလည်းအများပြီးရတယ်။
ဝမ်းသာကြရတယ် အားလုံးဒါနကုသိုလ်တွေရော သီလကုသိုလ်တွေရောပေါ့ ကြည်နူးရပါတယ် အားလုံးကဒီလိုအချိန်မှာ ဒီလိုဖြစ်နေတာပဲပေါ့နော် ။အခုအားလုံးအွန်လိုင်းကနေပဲ ပို့်စ်တင်ကြော်ငြာရတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်စိတ်ဓာတ်မကျသွားအောင် အားလုံးကိုမြှင့်တင်နေရတာပေါ့“စာတွေဖတ်ရတာပေါ့။
အဓိကတော့ စာဖတ်နဲ့အချိန်မှာတွေးတာနဲ့မဖတ်တဲ့အချိန်အတွေးမတူဘူး ကိုယ်တိုင်လည်းစာဖတ်ပျင်းတယ် ဒါပေမဲ့ အတွေးကတွေက မတူတော့ ကိုယ်လည်းအမြဲတမ်းစာဖတ်ရတာပေါ့ အဖေနဲ့အမေကတော့ အိမ်မှအမြဲအတူတူရှိတယ် အခုကတော့ အဓိက မေမေ့ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်နေရတယ် အခုကိုဗစ်ကာလမှာ
နဂိုရောဂါအခံရှိတဲ့သူတွေကပိုဂရုစိုက်ရတယ်လေ မေမေကလည်းကင်ဆာဖြစ်ထားတော့ တစ်မိသားစုလုံးက ပိုးဥလေးဥသလိုလုပ်ထားရတာပေါ့”“သားအဖဆိုတာ ချစ်ရင်သာချစ်မယ် ပါးစပ်ကပြောမနေဘူး အပြုအမူလေးနဲ့ပဲ လုပ်ပြကြတာပေါ့ ဒါပေမဲ့အဖေ့ကိုအရမ်းချစ်ပါတယ် ပြောရတာလည်းရှက်ပါတယ် ။
လွမ်းနေတဲ့ပရိသတ်အတွက် ယဉ်လတ်pageတစ်ခုထောင်ထားတယ် အဲဒီ့ ???? ကနေ ယဉ်လတ် ???? တွေလွှင့်ပေးနေတယ် အချိန်အကြာကြီးမတွေ့ဘဲ လွမ်းနေရတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် စကားပြောပေးတယ် အပတ်တိုင်း ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးတယ် အကြာကြီးမလွမ်းရပါဘူး လွမ်းရင် အဲဒီ့ ???? လေးကိုသွားလိုက်ပါ ဖော်လိုဝါလည်းတိုးတာပေါ့” လို့ ယဉ်လတ်က ဒီအင်တာဗျူးလေးထဲမှာ ပရိသတ်ကိုစကားပါးထားတာပါ။
ပရိတျသတျကွီးရအေလနျးစားခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး စကားကိုခဈြစရာကောငျးအောငျပွောတတျတဲ့အတှကျ ပရိသတျအားပေးမှုကိုခံထားရတဲ့ ယဉျလတျကတော့ အကျရှငျအခနျးတှကေိုလညျးပိုငျနိုငျတဲ့သရုပျဆောငျတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။စကားကိုအမွဲတမျးသှကျသှကျလတျလတျပွောတတျတဲ့
ယဉျလတျကတော့ သူ့အတှကျအဖကေ အမလေိုဖွဈနတောမို့ ရညျးစားစကားပွောခငျြရငျ အဖကေို့လာပွောပါလို့ ?????? ??????? နဲ့အငျတာဗြူးမှာ ဆိုထားပါတယျ။“သူမြားတှဆေို မိနျးကလေးတှကေ အမနေဲ့နတောမြားတယျ ယဉျလတျကကတြော့အမကေ ငယျငယျကတညျးကနမေကောငျးတော့ပွိုငျပှဲတှသှေားလညျး
ဖဖေပေဲလိုကျတာ ရှုတငျတှသှေားလညျးဖဖေပေဲလိုကျတာဆိုတော့ အဖကေ တဈခါတဈလေ အမလေိုပဲပေါ့ တဈခြို့သားအဖဆကျဆံရေးနဲ့တောငျမတူဘူးမိနျးကလေးကိစ်စတှတေောငျအဖကေဖွရှေငျးပေးတာ အဖကေ အမဖွေဈနတေယျ“ငယျငယျလေးကတညျးက မမေတေို့ပွနျပွောပွတာပေါ့ ပိစိလေးကတညျးက
ဖဖေပေဲအနှီးလဲ လုပျပေးတာပေါ့ ရှုတငျတှဘောတှမှော အမြိုးသမီးကိစ်စဖွဈရငျလညျး ဘယျသူမှမရှိဘူးလေ။ ဖဖေကေပဲသူ့ဘာသူသှားဝယျပေးတာပေါ့ အားလညျးနာပါတယျ”“ဒီလောကထဲစဝငျကတညျးကရော အလုပျမှနျသမြှဖဖေဆေုံ့းဖွတျခကျြနဲ့ပဲသှားတာဆိုတော့ မနျနဂြောငှားရငျတောငျဖဖေဆေုံ့းဖွတျခကျြကလိုမှာပဲ။
အဲ့တာကွောငျ့ ဖဖေပေဲမနျနဂြော ဖဖေပေဲအလုပျလကျခံပေါ့။ သမီးကိုယျတိုငျကလညျး ကိုယျ့အနားကိုခဉျြးကပျလာရငျ အဖကေို့ပွော အဖကေို့ပွောဆိုတော့ အဲဒီ့အခါကတြော့ ဖဖေကေို့ကွောကျပွီး ဘယျသူမှာရောကျမလာကွတော့ဘူးပေါ့ အိမျမှာလညျး အဲဒီ့အတိုငျးနောကျနကွေတာ သမီးနဲ့ယူမှာလေ အဖနေဲ့ယူမှာမဟုတျဘူးပေါ့။
အဖရှောရငျအဖအေ့ရှယျတှပေဲထှကျလာလိမျ့မယျတဲ့“အခုအိမျမှာတိုငျပငျကွရငျ အိမျထောငျရေးလညျးပါလာတာပေါ့ အဖပေေးစားတာယူမှာလားပေါ့ အိမျထောငျပွုမယျဆို မိဘသဘောတူဖို့လညျးလိုတယျလေ အဲ့တာကွောငျ့ရညျးစားဖွဈခငျြတယျဆိုရငျ အဖကေို့သှားပွော အဖလေကျခံရငျ ရညျးစားလာဖွဈပေါ့”
လို့ယဉျလတျကဆိုထားတာပါ။ယဉျလတျကတော့ လကျတလော သူ့ရဲ့လှုပျရှားမှုလေးတှနေဲ့ပတျသတျပွီး“ဒီနကေ့ ကထိနျသင်ျကနျးကပျတာပေါ့ ကိုခနျ့အလှူပေါ့နျောမတ်ေတာသင်ျဂဟအဖှဲ့တဈခုလုံးရဲ့ အမွငျ့မွတျဆုံးအလှူပေါ့နျော ဘုနျးဘုနျးတှဟေောကွတာပဲ ကထိနျသင်ျကနျးဆိုတာ အားလုံးကုသိုလျတှလေညျးအမြားပွီးရတယျ။
ဝမျးသာကွရတယျ အားလုံးဒါနကုသိုလျတှရေော သီလကုသိုလျတှရေောပေါ့ ကွညျနူးရပါတယျ အားလုံးကဒီလိုအခြိနျမှာ ဒီလိုဖွဈနတောပဲပေါ့နျော ။အခုအားလုံးအှနျလိုငျးကနပေဲ ပိျု့ဈတငျကွျောငွာရတာပဲရှိတယျဆိုတော့ ကိုယျ့ကိုကိုယျစိတျဓာတျမကသြှားအောငျ အားလုံးကိုမွှငျ့တငျနရေတာပေါ့“စာတှဖေတျရတာပေါ့။
အဓိကတော့ စာဖတျနဲ့အခြိနျမှာတှေးတာနဲ့မဖတျတဲ့အခြိနျအတှေးမတူဘူး ကိုယျတိုငျလညျးစာဖတျပငျြးတယျ ဒါပမေဲ့ အတှေးကတှကေ မတူတော့ ကိုယျလညျးအမွဲတမျးစာဖတျရတာပေါ့ အဖနေဲ့အမကေတော့ အိမျမှအမွဲအတူတူရှိတယျ အခုကတော့ အဓိက မမေကေ့နျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျနရေတယျ အခုကိုဗဈကာလမှာ
နဂိုရောဂါအခံရှိတဲ့သူတှကေပိုဂရုစိုကျရတယျလေ မမေကေလညျးကငျဆာဖွဈထားတော့ တဈမိသားစုလုံးက ပိုးဥလေးဥသလိုလုပျထားရတာပေါ့”“သားအဖဆိုတာ ခဈြရငျသာခဈြမယျ ပါးစပျကပွောမနဘေူး အပွုအမူလေးနဲ့ပဲ လုပျပွကွတာပေါ့ ဒါပမေဲ့အဖကေို့အရမျးခဈြပါတယျ ပွောရတာလညျးရှကျပါတယျ ။
လှမျးနတေဲ့ပရိသတျအတှကျ ယဉျလတျpageတဈခုထောငျထားတယျ အဲဒီ့ ???? ကနေ ယဉျလတျ ???? တှလှေငျ့ပေးနတေယျ အခြိနျအကွာကွီးမတှဘေဲ့ လှမျးနရေတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ စကားပွောပေးတယျ အပတျတိုငျး ဗီဒီယိုလေးလုပျပေးတယျ အကွာကွီးမလှမျးရပါဘူး လှမျးရငျ အဲဒီ့ ???? လေးကိုသှားလိုကျပါ ဖျောလိုဝါလညျးတိုးတာပေါ့” လို့ ယဉျလတျက ဒီအငျတာဗြူးလေးထဲမှာ ပရိသတျကိုစကားပါးထားတာပါ။
အိမ်အတွင်းအုန်းမဆွဲလို့ သမီးလေးကအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာလို့ ဝေဖန်လာသူတွေကို ​ပေါက်​ကွဲကာ​ဒဲ့​ပြောချလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းညီ